အဆာပြေ..Basic Needs…(ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အဆာပြေ..Basic Needs…(ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်)
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Feb 29, 2012 in Creative Writing, Drama, Essays.. | 13 comments
ပြန်လာခိုက်မင်္ဂလာဒုံ ၀ါယာလက်ကားဂိတ်မှာပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ကွမ်းတစ်ယာဝါးရင်း ထိုင်ငေးနေခဲ့မိတယ်…ဒီအချိန်မှာဘဲ..ကျွန်တော့အနီးမှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးပါ… ကားစောင့်နေတဲ့ ပုံနဲ့သားအမိနှစ်ယောက်ကိုသတိပြုမိခဲ့တဲ့ အတွက်…
ဒီဘ၀သရုပ်ဖေါ် ဇတ်ထုတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရပါတယ်… ခံစားရလွန်းလို့
တတ်သလောက်မှတ်သလောက် အရေးအသားလေးနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့မိပါတယ်…
၉၊၂၉၊၅၁၊ ဘတ်စ်ကား တစ်စီးပြီးတစ်စီးသာဝင်လာတယ်..အကိုတစ်ယောက်မပါလာဘူး…
ကြည့်ရင်းကြည့်ရင်း မစိန်မ ၀မ်းနည်းလာတယ်..ဘေးကိုကြည့်မိတော့လဲ ခုံတန်းပေါ်ထိုင်ပြီး
ဘိန်းမုန့်ကို ၀ါးရင်းငိုနေတဲ့ သမီးလေး”ရတနာ”ကိုမကြည့်ရက်စရာ တွေ့ရပြန်တယ်..ဘိန်းမုန့်
က မနက်အစောကြီးကတည်းကကျန်တာမို့ တော်တော်ခြောက်နေလေတော့ သမီးခမျာ မနဲဝါး
နေပုံရပါတယ်..ဗိုက်ဆာလွန်းလို့သာ သမီးလေးက အားခဲပြီးဝါးနေတာပါ..အရသာတွေ့ပုံတော့
မပေါ်ပါဘူး..ဟော..ဟော..ပြောရင်းဆိုရင်းလေလင် ၂၉ ကားတစ်စီးဆိုက်လာပြီ အကိုတော့
ဗိုက်ထဲကဆာလောင်လို့မြည်ဟည်းနေတဲ့ အသံတွေတောင် တဒင်္ဂ တိတ်သွားသလိုပဲ..အော်..
သမီးလဲ ကားသံကြားလို့ထင်ပါရဲ့..ဘိန်းမုန့်လက်ကျန်ကို အသာကိုင်ထားရင်း ကားကိုစူးစူး
ပုဆိုးအနက်ကွက်ကလေးနဲ့ သတ္တုထမင်းချိုင့်လေးဆွဲလို့ ဆင်းလာတယ်..သမီး..ထထ.ဖေကြီး
လာပြီ..လာ.လာ.၊ အစ်ကိုပေးပေး ထမင်းချိုင့်ညီမကိုပေး..အော်..အစ်ကိုရယ်..
.ညီမ အစ်ကိုပြောတာမှတ်ထားပါတယ်..ဒီသမီးက အဆာပြေအဖေ့ကို ကားဂိတ်က သွားကြိုရအောင်ဆိုပြီး ငိုနေလို့ပါ..
‘တော်ကွာ..တော်တော့..မင်းဘာမှပြောမနေနဲ့..ငါမင်းကိုအတန်တန်ပြောတယ်..ကားဂိတ်ကိုမလာနဲ့လို့..ကြည့်စမ်း..မင်းထဘီ အဖာတစ်ရာနဲ့..ဒါငါ့ကိုစော်ကားတာ..ငါသိက္ခာမကျ ကျအောင် မင်းလုပ်တာ..လူတွေကဘာထင်မလဲ..ဒီကောင်သောက်သုံးမကျလို့ မိန်းမနဲ့ ကလေး သူတောင်းစားရုပ်ပေါက်နေတာလို့ ငါ့ကိုပြောတာ မင်းခံချင်တယ်ပေါ့..ဟုတ်လား…
‘အစ်ကိုရယ်..မနက်က အစ်ကိုသွားတော့ ကျန်ခဲ့တဲ့ထမင်းလေးကို သမီးကို အကုန်ကျွေး
လိုက်တာပါ..လက်ထဲလဲ ငွေနှစ်ကျပ်ပဲကျန်တယ်..ဒါနဲ့ဘိန်းမုန့်၁ကျပ်ဖိုးဝယ်ပြီး ညီမအာသာဖြေလိုက်ပါတယ်..အစ်ကို့ကိုမနက်က ဘယာကျော်နှစ်ခုထဲနဲ့ ထမင်းချိုင့်ထည့်ပေး
လိုက်ရတာလည်း စိတ်မကောင်းပါဘူး..အစ်ကိုပင်ပန်းမယ်..ပိုဆာမယ်ဆိုတာ ညီမသိပါတယ် အစ်ကိုရယ်..ဒါကြောင့်ထမင်းကို သမီးအတွက်ပဲချန်ပြီး ကျန်တာအကို့ချိုင့်ထဲ ဖိသိပ်ထည့်ပေးလိုက်တာပါ..နေ့လည်ရောက်ပြန်တော့..သမီးကဆာပြီး.ငိုပြန်ရော..ဒါနဲ့ငါးမူးတန်ဘိန်းမုန့်နှစ်ခုထပ်ဝယ်ပြီး..သမီးကိုတစ်ခုကျွေး..တစ်ခုကိုညနေသမီးဆာလို့တောင်းရင် ကျွေးနိုင်အောင် ထားခဲ့ပါတယ်..ဒါပေမယ့်အစ်ကိုရယ်..သမီးလည်းညနေစောင်းတော့ ထမင်းစားချင်တာပေါ့ ဘိန်းမုန့်ကျန်တာကျွေးတော့လည်းမစား တအားကို ငိုနေတော့တာပဲ
ဒါနဲ့..သမီးရယ်ဖေကြီးလာရင် ထမင်းစားရမှာပါလို့ ချော့တော့..ဒါဆိုဖေကြီးကိုသွားကြိုမယ်ဆို
ပြီး ငိုပြန်ရော..ပထမတော့ အစ်ကိုမှာတဲ့ စကားကို သတိရပြီး သမီးကိုမသွားဖို့ ချော့ပါသေး
တယ်..ဒါပေမယ့် သမီးက တအားငိုတော့ သနားလွန်းတာနဲ့ သူလဲစိတ်ပြေလက်ပြောက်လေဆို
ပြီး ချော့မော့..ဘိန်းမုန့်တစ်ခုကျွေး..ကားဂိတ်လာထိုင်နေတာပါ အစ်ကို..ကားဂိတ်ရောက်မှဝင်
လာတဲ့ကားတွေကို ဖေကြီးပါလားလို့ ကြည့်ရင်းအငိုတိတ်ပြီး ဘိန်းမုန့်လေးကို ကိုက်ကိုက်စား
‘ဟေ့..တော်ကွာ..တော်..တော်…ရော့..ဒီနေ့ ငါ့လုပ်ခ ၁၅ိ/-ကျပ်..မင်းဝယ်ချင်တာသာကြည့်
သမီးကိုကောက်ချီပြီး ထွက်သွားတဲ့ အစ်ကို့ကျောပြင်ကို တစ်လှည့်..လက်ထဲက
အစ်ကိုပေးခဲ့တဲ့ ဆယ့်ငါးကျပ်တန် ခပ်နွမ်းနွမ်းလေးကို တစ်လှည့်ကြည့်ရင်း မစိန်မ ငိုင်နေမိတယ်.
.အော်..ငါ့ကိုသာ ဆူငေါက်သွားတာ..အစ်ကို့မျက်လုံးအိမ်မှာလဲ မျက်ရည်အပြည့်နဲ့ပါလား.
.ငါဒီညနေ စါနဲ့ မနက်အစ်ကို့ ထမင်းချိုင့် အတွက် ဘာဝယ်သွားရင်ကောင်းမလဲ………
လည်း..ထမင်းမ၀တဲ့ အဆာပြေ အရာရှိငယ်တစ်ယောက်ပါ…အဲဒီတုန်းက
ကျွန်တော်က အစိုးရဋ္ဌာနမှာ ဦးစီးအရာရှိ(၁၂၅၀ကျပ်စား)တစ်ယောက်ပါ။
မိဘအိမ်ကိုမထောက်ပံ့ နိုင်တဲ့အပြင် ကိုယ်တောင်ထမင်းအနိုင်နိုင်ပါ။မိဘတွေလည်းမ၀..ကိုယ်လည်းမ၀တော့
ဒီခံစားမှု့စာစုလေးကိုရေးပီး..သုံးနှစ်အကြာမှာ..ကျွန်တော်အလွန်မတန်ချစ်ခဲ့တဲ့ အလုပ်..မိဘတွေက `ငါ့သားလေးကဘယ်ဋ္ဌာနမှာအရာရှိဟဲ့´
လို့ပါတ်ဝန်းကျင်နားမခံသာတဲ့ အထိ လိုက်ကြွားခဲ့ရတဲ့..အစိုးရဋ္ဌာန ပြန်တန်းဝင်အရာရှိဘ၀ကို..အပြီးတိုင်စွန့်ခွါခဲ့ပါတော့တယ်….
လက်ညိုးထောင်တာ ကိစ္စရှိဘူးဟေ့ ..
လက်ညိုးနဲ့တော့ ထိုးမိစေနဲ့နော် …….
ကျနော်လည်း ဖတ်သွားတယ်ခင်ဗျ … ။
စိတ်မကောင်းစရာ အဖြစ်လေးပါလားဗျာ၊ ဟိုမိသားစု ဘဝလေးကို သနားသလို၊ အဲဒီတုန်းက ကိုကြီး ကြီးမိုက်ကိုလည်း သနား သွားပါတယ်လို့ … ။
ခင်တဲ့ .. ညီငယ် အံစာတုံး
ပြန်တမ်းဝင် တွေမှာလဲ အဆမပြေ တဲ့လူက မပြေပါဘူး unclegyi1974 ရယ် ….။
အပြင်အလုပ် လေးနဲ့ တွဲလုပ်ပါမှ … အဆင်ပြေနိုင်တာကလား …
သနားစရာ ဘဝသရုပ်ကို ကိုကြီးမိုက်ပီပြင်အောင်ရေးပြနိုင်ပါတယ်။
အပြင်လက်တွေ့ ဘဝတွေမှာ ဘယ်လောက်ငတ်နေကြမလဲ။အစာ
ဆင်းရဲ၊အသိပညာဆင်းရဲနဲ့ လူတွေလူတွေ သေဖို့ တွက်ထက်
ဖြဲသီး…အံဇာမ…ကိုချစ်ရင်ထူး..ကိုရင်မောင်…unclegyi1974…Mလုလင်…မောင်သန်းထွဋ်ဦး /အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ …တို့အားလုံးကိုကျေးဇူးပါဗျာ…ကျွန်တော်ရေးတာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ပါ…
ဒီ လူ့နှယ် ကိုယ်တောင် ထမင်း မဝတာ ။
မိန်းမ ကတော့ ယူလိုက်သေးတယ် ။ အခုတော့ ခလေးတစ်ယောက်ပါတိုးပြီ ။
နောက်ပြီးတော့ ညနေစာစားချိန်မှာ အိမ်ပြန်လာတယ် ဆိုကတည်းက မဟုတ်တော့တာ ၊
ငတ်နေမှတော့ ည ၁၀ နာရီ လောက်အထိ အလုပ် နောက်တစ်ခု ဆက်လုပ်ရမှာပေါ့ ။
မိန်းမကလည်း ငတ်နေတာတောင် အလုပ်တော့ထွက်မလုပ်ပဲ ၊
လင့် လုပ်စာကို ငုတ်တုတ် ထိုင်စားတယ် ။ အံ့ပါ့ ။
အဲလို လူမျိုးတွေကို သနားရလောက်အောင်တော့ ၊ အဘ အသည်း မနုလှပါဘူးကွယ် ။
သူတို့နှင့် ထိုက်တန်တဲ့ ဘဝ တွေကို ရနေတာလို့ ထင်မိတာပဲ ။
အဘ ရဲ့ အမြင်ကို အများစုကတော့ ကြိုက်မယ် မထင် ။
( အများစု ဆိုတာကလည်း ဆင်းရဲသားတွေကိုး )
ရွာသူားတွေရဲ့ အမြင်ကိုလည်း ကြားချင်ပါတယ် ။
အဘ ငယ်စဉ် ဘဝ တစ်လျှောက်လုံးမှာ ၊
အဘ ရဲ့ အဖေ နှင့် အမေ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ ၊
နေ့စဉ် ၊ မနက် ၇ နာရီ ကနေ ည ၉ နာရီ ( အစောဆုံး ) အထိ
နေ့စဉ် ၊ အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ဒါတောင် ဆင်းရဲနေလို့ ၊ ငတ်နေလို့ မဟုတ်ဘူးနော် ။
အဘFR ရေ..အဘ ရဲ့ အတွေးနဲ့ အယူအဆလေးကိုလက်ခံပါတယ်ဗျာ..အမှန်တကယ်ကို
မြန်မာပြည်ကလူတွေ အဘပြောသလိုကျိုးစား ရုန်းကန်ချင်စိတ်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်
မိန်းမယူ ကလေးမွေးထားပီး အလုပ်လုံးဝလုပ်ဘို့မကျိုးစားဘဲ…မိန်းမထဘီနားခိုစား
မိသားစုတွေခမျာ..ပညာသင်ချိန် ပညာမသင်ရနိုင်ဘဲ..စါးပွဲထိုးလုပ် ပလပ်စတိတ်ကောက်
ဘာဘဲပြောပြောပါ..အဘရဲ့ အပြုသဘောဆောင်ပီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအား
လုံးပြုပြင်သင့်တဲ့အချက်လေးကို မတူတဲ့ အမြင်နဲ့မန့်ပေးတဲ့အတွက်
အခုတော့ ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိလစာက တစ်သိန်းကျပ်တိတိ …
ငွေတစ်သိန်းကို တစ်လစာ လောက်ငအောင်သုံးဖို့ စီမံရတာ နိုင်ငံတော် သမတကြီးတိုင့်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်ရသလောက်ကို ဦးနှောက်စားပါတယ် …
အခုလက်ရှိ အခြေအနေမှာတောင် အလုပ်ထွက်လုပ်နေနဲ့ နေ့စားမိဘနှစ်ပါးကို အိမ်မှာစောင့်နေတဲ့ သားသမီးတွေ ရှိနေဆဲနော်။ မိဘပြန်လာမှ ဈေးဝယ် ချက်ကြရင်းနဲ့ တနေ့တာကို ဖြတ်သန်းကြရတယ်။